Atụmatụ, nnweta na akụkọ banyere Samsung Galaxy Gear S3 | Akụkọ akụrụngwa
Atụmatụ, nnweta na akụkọ banyere Samsung Galaxy Gear S3
Egwuregwu elektrọnik nke ndị ahịa na-eme ugbu a na Berlin agaghị akwụsị inye anyị akụkọ n'izu a. IFA dị na Berlin taa nwere onye ọhụụ doro anya, Samsung Galaxy Gear S3, na anyị achọghị ka ị hapụ otu nkọwa nke akụkọ niile ọhụụ ọhụrụ a sitere n'aka ụlọ ọrụ South Korea na-eweta. Elekere ahụ enwetala ndozi dị mma karịa ụdị nke gara aga, agbanyeghị na ọ gara n'ihu na-echekwa otu ụdị atụmatụ dị ka ọ na-amasị ọtụtụ ndị ọrụ, elekere amamịghe dị ka o kwere mee na elekere anya, ebe ọkpụkpọ gburugburu na-ebute. Ndị a bụ atụmatụ, ọnụahịa na akụkọ banyere Samsung Galaxy Gear S3
Ihe ngosi ohuru Samsung nwere Tizen Site na ọkọlọtọ, site na nke a anyị na-ekwu na Samsung na-aga n'ihu ịkụ nzọ na sistemụ arụmọrụ ya, na ngagharị doro anya iji tinye ya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu bụ ihe doro anya na ihe nwere ike ịche anyị n'ọdịnihu.
1 Tizen bụ nzọ Samsung maka elele anya
2 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Samsung Galaxy Gear S3
3 Galaxy Gear S3 Frontier, nkwa Samsung maka egwuregwu
4 Nka na ụzụ nkọwa nke Samsung Galaxy Gear S3
Tizen bụ nzọ Samsung maka elele anya
Ọ bụghị naanị ngwaọrụ nke sistemụ arụmọrụ a kwadoro, Samsung na-anwale Tizen na ahịa ndị na-apụta, sistemụ arụmọrụ nke yiri gam akporo, mana nke gosipụtara ike ya na-enweghị atụ egwu. Nke bụ eziokwu bụ na Tizen ka nwere ogologo ụzọ ọ ga - esochi Andriod, agbanyeghị, Samsung ekpebiela ịkụ nzọ na Tizen maka smartwatch ya. Anyi aghaghi iburu n’uche na ihe eji etinye ya ga - abụ ihe ntakịrị ejikarị wearable, na ebe a ka ụlọ ọrụ South Korea mara ka esi egwu kaadị ya nke ọma. Anyị na-ekwu na Tizen meghere ọnụ ụzọ iji ma gam akporo na iOS ngwaọrụ jikọtara na nche. Otú ọ dị, ndị mepụtara ga-abụ isi ihe na ụdị sistemụ arụmọrụ.
Ya mere, Samsung agbaala igosipụta ndị ọrụ n'ọdịnihu na Tizen maka Samsung Galaxy Gear S3 ga-enwe ihe dị ka Ngwa 10.000 kemgbe ụbọchị mmalite ya. Isi iyi nke ngwa a ga enyere anyi aka ilebanye anya anyi n’iru, n’agbanyeghi usoro nke ejikọtara ya. Na ahịa ndị na-apụta na ngwa arụmọrụ dị ala, Tizen na-arụ ọrụ nke ọma, na-eburu n'uche njirimara Samsung Galaxy Gear S3 ọ kwesịrị ịtụle. Agbanyeghị, anyị ga - elerịrị onye na - ekiri anyị anya iji hụ na ọrụ Tizen kwesịrị ekwesị.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Samsung Galaxy Gear S3
Samsung tinyere uwe ahụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na usoro nke Samsung Galaxy Gear S2 ka dị, elekere ọhụụ nke ụlọ ọrụ South Korea agaghị ahapụ onye ọ bụla. Ọ ka na-ejigide mgbatị okirikiri na bezel ya na-agbagharị, nke na-enye ya ọdịdị pụrụ iche na nke dị iche na ngwaọrụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na ha ga - akwalite ngwaike ndị dị ugbu a ịmalite. anyị na-ahụ modul LTE ọhụrụ (edebere maka Galaxy Gear S3 Frontier), njikọta kachasị dị na-abịa wearables. Agbanyeghị, iji obodo a, eSIM ga-adị mkpa, nke ga-adị naanị na ụfọdụ ahịa.
N'aka nke ọzọ, ụdị Galaxy Gear S3 niile ga - ejikọ GPS, nke ga - enyere anyị aka ileba anya n'ihe omume anyị. Ọkà okwu ahụ bụ ihe ọhụụ ọzọ na-agbakwunye na igwe okwu dị na ụdị nke gara aga, nke ga-enyere anyị aka iji ngwaọrụ ahụ dịka ngwaọrụ na-enweghị aka na ọbụlagodi na-egwu egwu. Na ngalaba oru anyi achoputakwala oganihu, 768MB Ram nke ahụ ga - akwado processor abụọ nwere isi arụpụtara nke Samsung n’onwe ya na ọsọ ya ruru 1Ghz.
Ọ na-ekwusi ike na teknụzụ nke ụdị nke mbụ ya, anyị na-ekwu n'ezie maka njikọta 3G, ndakọrịta na NFC na Samsung Pay, yana asambodo ndị na-eguzogide mmiri. Ihuenyo SUPERAMOLED toro na sentimita asatọ, na mkpebi 360 × 360 dị oke mma. Banyere eriri ndị ahụ, Samsung na-esonyekwa eriri ndị na-agbanwe agbanwe, ha niile dakọtara na 22mm nko, nke ga-enye anyị ohere ịnye ihe mmetụ ọhụụ ọhụụ anyị na-eche mgbe niile.
Galaxy Gear S3 Frontier, nkwa Samsung maka egwuregwu
Ikwuputa ahụike na egwuregwu enweghị ike ịla n'iyi na ngosi ahụ, ọ bụ ya mere Samsung ji wepụta ụdị dị iche iche nke gara aga, nke nwere usoro ihe mmetụta iji mee ka nlekota nke ọrụ ahụ anyị dịkwuo elu. Na accelerometer, GPS, gyroscope na ihe mmetụta obi na-agbakwunye ihe mmetụta ndị a:
Na nke a, Samsung na-achọ ịdọta mpaghara ndị na-eme egwuregwu na-egosipụta n'ụzọ doro anya na nke ọzọ Apple na-enye, Apple Watch. Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụghị, Samsung Galaxy Gear S3 Frontier bụ IP68 gbaara, nke na-enye ya ike iguzogide ike ihu igwe, mmiri na uzuzu. Dịka anyị kwuru, LTE teknụzụ nwere mmachi n'ụdị nlele a, site na eSIM. Otú ọ dị, iji ihe mmetụta na GPS eme ka anyị chee na batrị nke mbipụta a nke elekere agaghị adị mfe iru ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ nke Samsung kwere nkwa nnwere onwe, ma ọ dịkarịa ala na enweghị ule mbụ na nyocha.
Nka na ụzụ nkọwa nke Samsung Galaxy Gear S3
Samsung Galaxy Gear S3 Omuma
WiFi ac Njikọta
Mmiri na uzuzu na-eguzogide
Ihuenyo 1,3 inch SUPERAMOLED
Mkpebi 360 × 360
380 mAh batrị (ụbọchị 2/3)
1Ghz ihe nhazi abuo
Companylọ ọrụ ahụ ekwughị ihe ọ bụla banyere ọnụ na nnweta nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ekwesịrị ịkwụ ụgwọ dị elu karịa nke gara aga ma ga-abata n'ụlọ ahịa n'etiti Ọktoba na Disemba afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Atụmatụ, nnweta na akụkọ banyere Samsung Galaxy Gear S3
Asus ZenScreen, obere ihuenyo ejiri USB-C
Ihe ọhụrụ ASUS Zenwatch 3 dị ọsọ ọsọ, gbaa gburugburu ma peepe